Uhlobo olutsha esingxotyeni lead yokhuselo akanayo sleeve - China Shandong Chen lu
Action:: ukhuseleko kwimitha
Esilingana Lead :: 0.35mmpb
imigaqo :: L, M, S
HA08 yokhuselo esingxotyeni isondo (ubuso omnye ngaphandle imikhono)
Non-sleeve zeradiyoloji isondo lengubo ukhuseleko / imodeli isuti lead: HA08
Oku ikakhulu isetyenziselwa ukukhuselwa X-reyi, kwaye umsebenzisi ungakhetha uthotho ukhuseleko parameters ezahlukeneyo kunye nokubalulwa ngokungqinelana imfuneko. (Ukukhuselwa gamma yi ngokubanzi 0.5 MMPB).
Ubungakanani engagqibekanga yale dress medium size. Ukuba kukho ezinye iimeko, ixabiso Ziza kumana zisihla zinyuka, kumkholisa uthethwano ngqo!
Radioprotection isondo anti-elikhokelayo impahla cover okhokelayo ezikhuselayo entsha ngamazwe
Namhlanje, lo ultralight ezininzi, izinto yokhuseleko ultra-angamarhoqorhoqo, ultra-ethambileyo ehlabathini; Ethelekiswa amazwe impahla efanayo elikhokelayo, ubunzima xa kuthelekiswa ka-25 ukuya kuma-30 ekhulwini na lincitshiswe.
- ray iisuti protective kufuneka iipropati kakhulu yokhuselo
Ulwabiwo yipeyinti efanayo kunye nokusetyenziswa eqhelekileyo ilothe ayikho okuncitshiswe. Ukubonelela 0,35 / 0.5mmPb elingana phambili; Nxiba-nemithi, izinto kumphezulu lula-to-ecocekileyo ukukhusela utyalo-mali yakho inani;
Uyilo olutsha isakhiwo ray overskirt olukhuselayo anti-phambili suit
Kubhaliwe ezenziwe ngezinto ezininzi-umaleko, kunye kuyilo yobungcali ubume bomntu, nto leyo ekwenza uzive ukhululekile.
inkqubo yokuvelisa ngqo
umsebenzi ngokugqibeleleyo, ngocoselelo izinto, ixesha elide, akuvumela usebenzise ezinye qiniseka;
Ray isuti zokuzikhusela zabasebenzi ilokhwe yokhuselo
I style yokuqala uhlobo lugqityiwe
Rich ngobukhulu, nokuba Batyebile obhityileyo, omde kunye elifutshane, kusoloko kukho efanelekileyo kuwe, ube ngathi ente kuwe; A izimbo elinesibini, imibala abazizityebi inokufunyanwa, bapapashe ngokupheleleyo ubuntu bakho.
Previous: Uya kwambatha radiation-ubungqina chen lu iye intsebenzo entle uhlangothi single yokhuselo
Okulandelayo: protective lead rubber cap omtsha chen lu kaThixo ungenziwa ngemfuneko ezinye alingana
China Hot Sale imisebe Esondweni
Chinese X-Ray zokhuseleko Esondweni
Izibhedlele Sebenzisa irabha ndikhaphe Esondweni
Izibhedlele Sebenzisa X-Ray Esondweni
Rhweba Material zokhuseleko Esondweni
New zokhuseleko Mfutshane Esondweni
New Split zokhuseleko, lisesingxobeni Esondweni
Uhlobo olutsha Of zokhuseleko Esondweni
Protection x-reyi lead Esondweni
Zokhuseleko Medical Esondweni
Esondweni zothintelo With Import Material
X-Ray kukhuseleko Esondweni
Imisebe Lead Esondweni
Soft zokhuseleko Esondweni
Soft Split zokhuseleko Esondweni
Split zokhuseleko Esondweni Nge Import Material
Super Soft zokhuseleko Mfutshane Esondweni
Super Soft Split zokhuseleko Esondweni
X-Ray Lead Esondweni
X-Ray zokhuseleko Mfutshane Esondweni
X-Ray zokhuseleko Esondweni